XOG+WARBIXIN: Kulamo xasaasi ah oo ka dhacaya Aqalka Madaxtooyada Garoowe & Siyaasiin Isku tolan noqday. – Puntlandtimes
XOG+WARBIXIN: Kulamo xasaasi ah oo ka dhacaya Aqalka Madaxtooyada Garoowe & Siyaasiin Isku tolan noqday.
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxtooyada Puntland ayay ka socdaan kulamo siyaasadeed oo xasaasi ah, kuwaas oo u dhaxeeya Madaxda maamulkaas iyo Guddi Dhexdhexaadin ah oo ka socda Aqalka Sare ee Soomaaliya oo ay ku jiraan siyaasiin uusan wanaagsaneyn xariirka kala dhaxeeya Madaxtooyada Puntland.
Kulamadan siyaasadeed waxaa aad looga hadlayaa khilaafka u dhaxeeya dawladda Faderaalka iyo Madaxda Puntland, gaar ahaana waxaa diiradda lagu saarayaa qodobada sidda gaarka ah khilaafku uga taagan iyo wax ka qabashadiisa.
Wasiiro iyo guddiyada aadka ugu dhaw wada xaajoodyadan ayaa sheegay in diiradda la saarayo sidaas oo kale qodobada ay ka mid yihiin sidda looga miro-dhalin karro go`aamada rasmigooda oo ay u noqon karaan kuwa tanaasulaad leh.
Warar hoose ayaa sheegaya in guddiga Aqalka Sare kasocda qaarkood aysan dooneyn in ay is arkaan Madaxda sare ee Puntland, balse ay guddiga qaar kamid ah u dirayaan, gaar ahaana Madaxda sare ee maamulkaas taladiisa haysa, oo aysan dhawaanahan xariir wanaagsan kala dhaxeynin.
Xogtu waxay sheegaysaa in ay Puntland xooga saarayso in la helo damaanad qaade rasmi ah, oo dhamaan qodobada u dhaxeeya dawlad gobaleedyada iyo dawladda Faderaalka ay tahay intii lasoo saaray, marxaladdaha hadda lagu jirana looga gudbi karro oo kaliya sidaas.
Puntland ayaa hogaamisa madasha Golaha Iskaashiga dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxayna ku dhagan tahay in meelmar laga dhigo warsaxaafadeedkii lasoo saaray September 2018, kaas oo ay ku cadaayeen tabashada dawlad gobaleedyada ee ay ka qabaan dawladda Faderaalka, sidaas oo kalena ay doonayaan in wax kasta ay noqdaan wada hadal damaanad qaade leh.